သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: လက်ဆောင်
လူတွေက မျှော်လင့်ချက်အတွက် ခရီးဆက်တယ်
ဒါပေမယ့် ငါ့အတွက်ဒီခရီးက မျှော်လင့်ခြင်းကမ်းဆုံးပဲ….
ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ဘဝစာ မျှော်လင့်ခြင်းတွေပိုက်ပြီး ကျွန်တော်လေဆိပ်ထဲဆိုက်ကပ်ခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ သာယာလေးနက်တဲ့ အသံရယ်၊ လျှို့ဝှက်မှုတွေရယ်၊ ဝိုးတဝါးနဲ့သူမပုံရိပ်တွေကတော့ ဦးနှောက်ထဲမှာ အလွတ်ရနေပြီ။ အဲဒီဓာတ်ပုံကိုင်ပြီးပဲ ကျွန်တော် ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ခဲ့ပါတယ်။ အလင်းချိုးတဲ့တစ်ထောင့်မှာတော့ ကျွန်တော့်နတ်သမီး ကျက်သရေရှိတဲ့ဝတ်စုံနဲ့။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားတွေကျိန်းသွားတယ်…. ဘေးမှာလည်းအစ်ကိုတစ်ယောက၊် သူတို့ အပြုံးချင်းချိတ်လို့။ ဘုရား…ဘုရား…သူမအရင်ကပြောတဲ့အတိုင်း မဟုတ်ပါစေနဲ့။ ကျွန်တော့်မျှော်လင့်ချက်တွေ သေတ္တာထဲတည့်ပြီး လာလမ်းကိုပဲပြန်လှည့်ရမလား? ခရီးဆုံးကိုလှမ်းရမလား? ချီတုံချတုံဖြစ်နေတုန်းပဲ သူမ ကျွန်တော့်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်အငတ်မွတ်ဆုံး အပြုံးတစ်ခုကိုလှစ်ဟလို့….. ကျွန့်တော့်ဘဝတစ်ခုစာ ပျော်ဝင်စေလောက်တာပေါ့။ သူမကစကားဆိုတယ်….
“ဟုတ်…ဟုတ်ပါတယ်” သူမနဲ့တွေ့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်လှချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်အသံတွေ အက်ရှကုန်တယ်။
“အင်း…ဓာတ်ပုံထဲကထက် ပိုငယ်တယ်ထင်ရတယ်နော်။” အနီရောင်နှုတ်ခမ်းတစ်စုံနဲ့တင် သေလောက်ရဲ့။ သူမကျွန်တော့်ကိုစေ့စေ့ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပုံများ… အမှန်တော့ကျွန်တော်က ဥုံဖွဆိုပြီး အသက်ပိုကြီးချင်နေတာ သူမမှ မသိပဲ။
“ထင်လို့ပါ…မ…။ ဒါနဲ့…” ကျွန်တော့်မျက်လုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုသူမသိတာပေါ့။
“သြော်ဒါက… ကိုအောင်ထွန်းပါ။ မ….ရဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းပေါ့။” သေချာသွားပါပြီ။ အရာအားလုံးခဏရပ်တန့်သွားတယ်။ သူကအောင်မြင်စွာပြုံးပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။ ကျွန်တော့်နက္ခတ်ကို ဂဠုန်ခွစီးလိုက်သလိုပါပဲ။
“တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်…” ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ဝမ်းအနည်းဆုံး အခိုက်အတန့်ဆိုတာတော့ မျက်နှာမှာ မပေါ်စေရပါဘူး။
“ဟုတ်ကဲ့ အကူအညီလိုရင်လည်းပြောပါ။ ကျွန်တော်ကဒီရောက်နေတာကြာပြီ။”
လူယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ဂဠုန်ကြီးက ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ပြောတယ်။ အဲဒီအချိန်ကြမှ ကျွန်တော့်ကိုလာကြိုတဲ့သူငယ်ချင်းဇော်သက်က နောက်ကြခြင်းနဲ့ ရောက်လာပါတော့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အလာပသလာပ ပြောပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။
သူ့အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကမေးတယ်။ ကျွန်တော်ဖြေဖို့တောင် အားမရှိတော့သလိုပဲ။
ကျွန်တော်ငြင်းပယ်ခံရတဲ့နောက်တော့ လာလမ်းအတိုင်းပြန်မယ် စိတ်ကူးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခံနိုင်ရည်မွေးပြီး ရင်ဆိုင်ရဲရမှာပေါ့။ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက်တဲ့ အသံလည်း နားထဲမှာ တဝုန်းဝုန်းနဲ့ပေါ့။ သွေးပျက်လောက်ရဲ့။
လူဆိုတာကမျှော်လင့်ထားသလိုမဖြစ်ရင်၊ ငြင်းပယ်ခံရရင် စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တယ်
ကျွန်တော်လဲလူထဲကလူပါပဲ ဒါပေမယ့် အရှုံးတွေနဲ့ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းဖြစ်နေပါပြီ…..
ရရာအလုပ်ဝင်လုပ်ရင်း သူမကိုတွေ့ခွင့်မရှိတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့မြို့မှာ အသက်ဆက်ခဲ့တယ်။ မရှိမဲ့ရှိမဲ့မာနကိုပိုက် ကျွန်တော်ငတ်တစ်လှည့် ပြတ်တစ်လှည့်နဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော်မှာအမြဲတမ်းချမ်းသာတာဆိုလို့ ဂစ်တာတစ်လက်ရယ်၊ ကော်ဖီသောက်တဲ့ခွက်တစ်ခွက်ရယ်၊ ဆေးလိပ်တစ်ဘူး နဲ့ ဇစ်ပိုမီးခြစ်တစ်လုံးရယ် ကျွမ်းနေတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုရယ်ပါပဲ။ သြော်..သူမအတွက် စုထားတဲ့ ပန်းမျိုးစေ့တွေရယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ဇကာပေါက်အဆုတ်ပါ အဆစ်တိုးလာတယ်တဲ့ ဆရာဝန်ကပြောတယ်။ ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်သက်ရက်တွေကို ရေတွက်နေပါတယ်။ ထွက်ပြေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ချုပ်ငြိမ်းချင်တာပါ။
ပြတင်းပေါက်ကဝင်လာတဲ့ လေပြင်းကခပ်ကြမ်းကြမ်းနမ်းလိုက်လို့ အခန်းထဲက ပြက္ခဒိန်က ပြုတ်ထွက်မတတ်။ ပြာခွက်ထဲကဆေးလိပ်ပြာ တွေကလည်း စားပွဲပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲ။ နံရံမှာထောင်ထားတဲ့ ဂစ်တာကလည်း ကြိုးတွေပြတ်လို့။ ကျွန်တော့်ကမ္ဘာ ဖရိုဖရဲနဲ့ပေါ့။ တံခါးသံကြားလို့ ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တော့ သူမ…။ အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ အပြုံးထူထူလေးဆင်မြန်းပြီး တံခါးရှေ့မှာ ရပ်လို့…
“လာမည့်စနေနေ့မှာ မ…ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်လေ… ဘုရားကျောင်းမှာ…” သူမစကားအဆုံး ကျွန်တော့်နားထဲမှာ ခေါင်းလောင်းသံတွေ ညံသွားတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်လို အင်အားမျိုးနဲ့သွားရမလဲ? တွေးနေတုန်း ကျွန်တော် လက်နဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်လို့ ချောင်းတစ်ချက်ဆိုး လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ချောင်းအရှိန်ကို သိတော့ သူမက
“ဟုတ်…သောက်ပါတယ်…မ…” တကယ်တော့ကျွန်တော် လမ်းဆုံးနေပြီ။
“ရော့…….ချောင်းဆိုးရင်သုံးဖို့…” ပြောပြောဆိုဆိုသူမရဲ့ လက်ကိုင်ပဝါဖြူလေးကို ထုတ်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ ကြည်နူးမိတာပေါ့။
“မဝင်တော့ဘူး….အောက်မှာ အထွန်း စောင့်နေတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်…သွားတော့မယ်နော်…”
“ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့” ပြောပြောဆိုဆိုသူမလှည့်ထွက်သွားတော့ သူမရဲ့ ရနံ့တစ်ချို့ပဲကျွန်တော်နဲ့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့။
သူမတို့ ကားလေးမီးခိုတန်းသွားတဲ့အထိ ကျွန်တော်ချောင်းကြည့်မိတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ လေပြင်းနဲ့အတူ ကျွန်တော့်အဆုတ်ထဲကလည်း လေတွေရော အနီရောင်တွေရော တလဟောပြိုကျလာပါတော့တယ်။ သူမပေးခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်ပဝါလေး ချင်းချင်းနီတဲ့အထိပေါ့။ ကျွန်တော်သိတယ် နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ် ဇော်သက်ရယ် နောက်ပြီးရင်ခွဲရုံရယ်ကို ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်သက်ပြီး ဝိဥာဉ်ကတော့လေနှင့်အတူ လွင့်မျောသွားပါတော့တယ်။
သူတို့အတွက်တော့ ကျွန်တော့်ချွေးနဲစာထဲက လိုအပ်မယ့်အသုံးအဆောင်လေးတွေ ပြန်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြားသိတာဆိုလို့ ဇော်သက်ရယ်။ ရင်ခွဲရုံက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရယ်ပါပဲ။
မပူပါနဲ့ မ…ရယ် မရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကို ကျွန်တော်မရောက်ရောက်အောင်လာမှာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ သူမအတွက်နှလုံးသားကိုပဲ လက်ဆောင်ပေးပါရစေ…
လခြမ်းပဲ့ကလည်း ကုန်ခါနီးမီးစာလို ဟုန်းခနဲတောက်ပြီး ငြိမ်းတော့မလို။
ပုရစ်တွေကရဲ့ တတွီတွီနဲ့ အာခြစ်နေသံက
နားထဲမှာ ငှက်ဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့ ရက်ပ် ရွတ်သံအလား….
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ ဒီခရီးဒီလမ်းကို အချိန်မတော်တစ်ကိုယ်တည်းလာဖို့ ဇော်သက် တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် စိတ်ကူးမိမှာမဟုတ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ဇော်သက်ကမကြောက်တတ်ဆုံး။ ဒါတောင်ဘာမှန်းမသိ ဒီတစ်ခါတော့ ဇော်သက်ရွံ့ နေတာကို ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။
ဒါပေမယ့် မတန်ဘူးကွာ။ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်နဲ့များ…အံ့ပါ့။
ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ဇော်သက်တစ်ယောက်တည်း ရင်ခွဲရုံကအပြန် ကားမောင်းရင်းပြောနေတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပေါ့။
သူ့မျက်နှာမှာတော့ စိတ်မကောင်းခြင်းးနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်းရောယှက်ပြိုင်နေလေရဲ့။
ဒါမှလည်းသူစိတ်သက်သာရာရမှာပေါ့ ပြောပါစေ။ အခုအချိန်မှာ သူ့ကဇော်သက်ကလည်းမမြင်တော့။
သူအချစ်ဆုံး ဆိုသည့်အရာ သည်လည်းအခုအချိန်မှာ ထိတွေ့ခွင့်တောင်မရှိတော့။ ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့သောဘဝမှာ သူအတွက်မနက်ဖြန်ဆိုတာက နထ္တိ။ တစ်ယောက်တည်းတွေးရင်း စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် လေတစ်ချက်ချွန်လိုက်တုန်း သူလေချွန်တာကို ဇော်သက်ကြားသွားပြီး
“မင်းပါလာလား။ အေးကွာ ငါနဲ့စကားလေးဘာလေးပြောပါဦး… ငါတစ်ကောင်တည်းကားမောင်းပျင်းတာ မင်းလည်း သိသားနဲ့။”
သူလည်းသိပါသည်။ ကျွန်တော်သူနှင့် အခုအချိန်မှာ စကားပြောလို့မရမှန်း။ ဒါတောင်သူ့ဝသီအတိုင်း နောက်လိုက်ပြောင်လိုက် လုပ်နေတုန်း။ ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို စချင်နောက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။
ကျွန်တော် ကားကက်ဆက်ခလုတ်ကိုနှိပ်၏။ ဘယ်လိုမှနှိပ်လို့မရ။ ထ်ိလို့မရ။ အာရုံတွေကိုစုစည်း ကျွန်တော်ထပ်နှိ်ပ်သည်။ ဘယ်လိုမှမဖြစ်။ စိတ်တွေကစုစည်းလို့မရ။ ကျွန်တော်လက်လျှော့ချင်လာသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော်ရှိသမျှအာရုံကိုစုစည်း စိတ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်အငြိမ်ဆုံးထား ကက်ဆက်ခလုတ်တစ်ခုတည်း ကိုသာဆောင့်နှိပ်ချလိုက်သည်။ “အုန်း….”စပီကာအသံ မတိုးရသေးသည့်အတွက် သီချင်းသံကအကျယ်ကြီး ထမြည်လေသည်။
ဟဲ့ သောက်ခွေး… ဇော်သက်လန့်သွားသည်။ သူလန့်တာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အားရပါးရ ရီမိသည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရီခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဇော်သက်ကျွန်တော့်ကိုဆဲသည်။ သူဆဲသည့်အသံမှာ အခုအချိန်မှာ အသာယာဆုံးအသံဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်။ ဘာပဲပြောပြော ဇော်သက်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်သည်။ တော်ရုံလူသွေးပျက်မည့် အလုပ်ကိုစိတ်စေတနာနှင့် ကျွန်တော့်အတွက် လုပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဇော်သက်ထံမှ ဘာအသံမှမကြားရတော့ပေ။ သေချာပါသည်။ ကားစပီကာကလွင့်ပျံ့နေသော သတိ ဆိုသည့် ကျွန်တော်အလွန်နှစ်သက်သော သီချင်းသံကြားရင်း ဇော်သက်ကျွန်တော့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။
သတိ သတိ သတိတော့ထား
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သီချင်းမှာမျောပါနေတုန်း ဇော်သက်ကကားစက်ကိုသတ်လိုက်သည်။ သြော်…ကျွန်တော်သူမကိုလွမ်းရင် လာမျှော်လေ့ရှိသော သူမတို့အိမ်အနောက်ဖက်ကိုတောင်ရောက်နေခဲ့ပြီဲ။
အဖြူရောင်နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးကတော့ အမှောင်အောက်မှာသူမဟုတ်သလို ငြိမ်ကုပ်လို့။ ညမီးအနီရောင်မှိန်မှိန်လေးထွန်းထားတဲ့အခန်းထဲက အပေါ်ထပ်ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းက သူမအခန်းကိုကြည့်မိ။ အရာအားလုံးလှပစွာ သူမနဲ့အတူ အိပ်မောကျနေမှာပါ။ အိမ်နောက်ဖေးမြေကွက်လပ်မှာ သူမကိုယ်တိုင်စိုက်ထားသော ပန်းရနံ့မျိုးစုံက ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲအထိ ရောက်လာလေသည်။ ဇော်သက်ကကားပေါ်မှဆင်း၍ ကားနောက်ဖုံးထဲမှ အထုပ်တစ်ခုကိုယူလိုက်လေသည်။ ထိုခဏ၌ ကျွန်တော့်ဘယ်ဘက်ရင်အုံ ဟာခနဲဖြစ်သွားလေသည်။ အထုပ်ကိုသတိကြီးစွာထား၍ကိုင်ရင်း ဇော်သက်ကခြံကိုကျော်တက်ဖို့အတွက် နေရာရှာနေသည်။
အထုပ်ထဲကဘူးကလေးထဲမှာတော့ သူမအတွက်ကျွန်တော်စုထားတဲ့ ပန်းမျိုးစေ့တွေကို အနီရောင်စွန်းနေတဲ့သူမရဲ့ လက်ကိုင်ပဝါလေးနဲ့ထုပ်လို့်…..နောက်ပြီး……နောက်ပြီး…….
ဒါပေမယ့် လမင်းနဲ့အတူ ကြယ်တွေက
အာဒမ်ကအရာရာကို အံတုပြီး သူ့ဘယ်ဘက်နံရိုးနဲ့ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ချစ်သူအတွက် ပန်းသီးတစ်လုံးဆွတ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိသေးတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်အသစ်တစ်ခု နှလုံးသားနဲ့ ဖန်ဆင်းပေးချင်တာပါ။
အရှေ့ဆီမှာရောင်နီနိုးလာပြီ။ ညအမှောင်ထုကိုခွဲပြီး ပထမအလင်းတန်းတွေထိုးထွက်တော့ ကောင်းကင်မှာ အမည်းနဲ့ အပြာရောင်ကဘောင်အနားကွပ်လို့ ခရမ်းနုရောင်၊ ပန်းဆီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်နဲ့ အနီရောင်အပြင် မနက်ခင်းအရောင်စုံက နေမင်းကြီးထွက်အလာကို ခစားနေကြတယ်။
ငှက်ကလေးတွေလည်း အိပ်မှုန်စုံမွှားနဲ့ အချင်းချင်းတွတ်ထိုးလို့။
ဇော်သက်ပြန်သွားပြီ်။ ကျွန်တော်ခြံအနောက်ဘက်က ဒန်းလေးပေါ်မှာထိုင်ရင်း မနက်ခင်းရဲ့သံစဉ်ကို ကြိုးညိုနေမိတယ်။ တစ်ခြားပန်းပင်တွေ ဝိုင်းအုံနေတဲ့အလယ် ဇော်သက်ခုနကတူးဆွသွားတဲ့နေရာကို မမှိတ်မသုန်စိုက်ကြည်နေတုန်း ကျွန်တော်အရမ်းပျော်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်အနှစ်နှစ်အလလက ဆုတောင်းတွေပြည့်ပြီပေါ့။
နေရောင်ခြည်ရဲ့ အနမ်းထိုမြေပြင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိတာနဲ့ ပင်စည်လေးတစ်ခုမြေကြီးထဲကထိုးထွက်လာတယ်။
နောက်ပြီး ပင်စည်ကနေကြီးထွားလာလိုက်တာ အကိုင်း၊ အခက်၊အလက်၊ အရွက်တွေနဲ့ခဏချင်းဝေဆာလို့ပေါ့။
အပင်လေးက ကျွန်တော့်ခါးအလယ်လောက်ရောက်တော့ ဆက်မတက်တော့ဘူး။ ရပ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိသမျှ စိတ်စွမ်းအားတွေအပင်လေးထဲ မှာနှစ်ထားလိုက်တယ်။ နောက် ကျွန်တော်အမျိုးအမည်မသိတဲ့ အလွန်ထူးဆန်းပြီး စိတ်ကိုကြည်နူးစေတဲ့ရနံ့လေးတစ်ခုရလိုက်လို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ထူးဆန်းတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့် ခုနကအပင်လေးထိပ်က အရွက်လေးတွေကြားထဲမှာပွင့်လို့။
သူ့အရောင်အဆင်းက မနက်ခင်းအရောင်လိုပါပဲ။ စုတ်ချက်ပိုင်တဲ့ ပန်းချီဆရာတစ်ယောက် နူးညံ့တဲ့ အရောင်အားလုံးကိုစပ်ပြီး သေသေချာချာ အနုစိတ်ခြယ်ထားလိုက်တော့ နာမည်တပ်လို့မရသလို ကျွန်တော်အရင်က မမြင်ဘူးသေးတဲ့အရောင်ပါ။ သူ့ရနံ့ကလည်း ကောင်ကင်အထိကိုပျံ့လွင့်ပြီး ရနံ့ရသူတိုင်း သူတို့ငယ်ဘဝကပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပြန်တွေးမိသလိုမျိုး စိတ်ကိုကြည်နူးစေတာပေါ့။ သူ့ရနံ့ရလို့လားမသိဘူး ခြံထဲမှာရှိတဲ့ တစ်ခြားအပင်ပေါင်းစုံကလည်း အပြိုင်အဆိုင်ပွင့်လာကြတာ အလှပေါ်အယဉ်ဆင့်သလို ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး သင်းထုံလို့ပေါ့…..
ကျွန်တော်အရမ်းကိုပျော်မြူနေတုန်း သစ်ရွက်ခြောက်နင်းသံကြားတော့ အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတယ်။ သူမ…..သေချာတော့ပေါ့ ကျွန်တော့်နတ်သမီး….အပင်တွေကိုမနက်ခင်းအစောပိုင်းရေလောင်းနေကျ သူမ….. ညအိပ်ဝတ်စုံအဖြူရောင် လေးနဲ့ ရေပုံးနဲ့ရေခွက်လေးကိုကိုင်ပြီး တအံ့တသြနဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရပ်နေတယ်။ သူမဆံနွယ်ရှည်တွေကလည်း ကပိုကယိုနဲ့ပုခုံးကိုမှီလို့…မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလှကို သိချင်ရင် မနက်ခင်းအိပ်ယာထတဲ့ အချိန်ကိုကြည့်တဲ့။ တကယ်လို့သာအဲဒီလိုကြည့်ရရင် ကျွန်တော့်နတ်သမီးကအလှဆုံးနေမှာပါ။ ကျက်သရေရှိတဲ့သူမမျက်နှာပေါ်မှာ ဝိုင်းစက်အရောင်တောက်တဲ့မျက်လုံးတွေက အရောင်ပိုတောက်လို့ သူမနှုတ်ခမ်းလေးကလည်း လေးကိုင်းလိုကွေးညွှတ်လို့ အံ့သြနေလေရဲ့။ ကျွန်တော်က ယောင်ပြီးသူမနာမည်ကို လှမ်းခေါ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် မသိသလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့နေရာကို တိုး…ဝင်…ခွဲ…ထွက် ပြီး ပန်းပွင့်ရှိရာကိုပြေးသွားလေရဲ့။ နောက်ပန်းပွင့်လေးကို ကိုင်ကြည့်ပြီး သူမတစ်ကိုယ်တည်း…
“နေပါဦး…ဒီပန်းပင်လေးက ဘယ်လိုလုပ်ီခြံထဲကိုရောက်နေပါလိမ့်?” သူမတစ်ကိုယ်တည်း ရေရွတ်ရင်း ကလေးတစ်ယောက်လိုပျော်ရွှင်စွာ မြူးပျော်နေလေရဲ့…
“အော်..ဟုတ်ပြီ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုရင် ဒီပန်းလေးကအရမ်းလှမှာ….”
သူမအရမ်းပျော်ပြီး ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ပန်းလေးတွေကြားမှာ ခုန်ပေါက်နေတာပေါ့၊ အဲဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရင်းကျွန်တော်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းရယ်လွန်ဆွဲနေတယ်။ အရမ်းပျော်ရရင် ငိုရတတ်တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်အပျော်တွေကိုပဲပိုက်ပြီး သူမတို့ခြံထဲကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်လက်ဆောင်လေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ သူမဒီနေ့အစွမ်းကုန်ကို လှနေမှာပါ။ နောက်ပြီး ဘုရားကျောင်းထဲက တွေ့သမျှလူတွေကလည်း သူမကိုငေးမောနေမှာပေါ့။ သူမတို့နှစ်ယောက်ဘဝတစ်သက်တာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
အလင်းတန်းတွေရောပြွမ်းနေတဲ့နေရာဆီကို လေပြည်ကိုဆန်ရင်း ကူးခတ်ဆဲပေါ့…
စိတ်ထဲမှာ မျိုးကြီးရဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ပါဆိုတဲ့ သီချင်းကိုဆိုညည်းရင်း….
(အလွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ စာအရေးအသားတွေကို စာဖတ်သူများ ခံစားနိုင်ရန် ကျွန်မ မဟုတ်သော ထိုစာရေးသူ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် တင်ဆက်ပြသထားပါသည်။
သူ၏ အနုပညာ လက်ရာကို ခံစားကြည့်ကြပါရှင်။)
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 2:32 AM
ကောင်းလိုက်တာ မလေးရေ.. တကယ်ဒီဝတ္ထုမှာ မျောပါသွားတယ် ။
လက်ဆောင်ကို ဖတ်သွားပါတယ် မအိမ့်ရေ... “အလင်းချိုးတဲ့ တစ်ထောင့်” တို့၊ “နက္ခတ်ကို ဂဠုန်စီးတယ်” တို့ ဖတ်ပြီး မအိမ့် ဒီတခါရေးပုံ တမျိုးဆန်းတယ်လို့ ထင်တော့ ထင်သား။ လက်စသတ်တော့ မအိမ့်မဟုတ်ဘူးကိုး။ အရေးအသားက “လန်း” တယ်ဗျာ။ မအိမ့်ရဲ့ ကလောင်ခွဲဆိုရင်လည်း အတော် ပိုင်နိုင်တဲ့ ကလောင်ခွဲလို့ ပြောရမှာပဲ။